INSTAFAMOUS အလှတရားဘလော့ဂါဆိုဖီဟန္နရစ်ချတ်ဆန်နှင့်တွေ့ဆုံပါ - သတင်း
အမဲရောင်ဆံပင်, မျက်နှာရတနာ, သတ္တု, တောက်ပနှင့် pastels - ဆိုဖီဟန္နရစ်ချတ်ဆန် တကယ့်ဘဝကမိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမသည် Asos, Motel, Illamasqua, Urban Decay နှင့် Rimmel London တို့နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလွတ်လပ်သောသူမ၏၏တ ဦး တည်းကိုခေါ် ထိပ်တန်းဆိုရှယ်မီဒီယာသြဇာသက်ရောက်သူများ သူမသည် 96.8k ရှိပါတယ် Instagram နောက်လိုက်များနှင့် YouTube စာရင်းသွင်းသူ ၉၀၀၀၀ ရှိသည် သူမ၏ရုပ်သံလိုင်း သူမကြံ့ဆံပင်၊ တောက်ပသောနှုတ်ခမ်းများနှင့်အခြားအရာများအတွက်သင်ခန်းစာများကိုပေးသည်။
လန်ဒန်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့အိပ်ရာတစ်လုံးတည်းတိုက်ခန်းမှာနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲငါတို့ဇာတိမြို့၊ Essex ရှိ Colchester ကိုပြောင်းရွှေ့နေတယ်။
ငါလန်ဒန်အရှေ့ပိုင်းကိုချစ်တယ်။ Brick Lane ဟာတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဈေးကောင်းတွေရနိုင်တဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုပါ။ သငျသညျအခြို့သောအံ့သြဖွယ်စပျစ်သီးကိုတွေ့တွေ့ရနိုင်သည်။
လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်၏ဝါသနာသည် blogging ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်အတွင်းအချိန်ပြည့်အလုပ်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အားလပ်ချိန်တိုင်း၌ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေသည်။
များသောအားဖြင့်နေ့တိုင်းငါမနက် ၇ နာရီမှာထတယ်၊ မနက် ၉ နာရီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ ည ၇ နာရီခွဲမှာအိမ်ပြန်တယ်။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာငါ့နေ့တော်တော်များများကုန်သွားပြီ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အခွင့်အလမ်းရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်သည်တီဗွီအချို့ကြည့်ပြီးဘလော့ဂ်နှင့်ပတ်သက်သောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ အီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ပို့စ်တစ်ခုရေးသားခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ယူကျုချန်နယ်အတွက်သင်ခန်းစာရိုက်ကူးခြင်း။
ငါကငါ့နေ့ကအလုပ်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအမြဲပေါ့, ဒါကြောင့်ငါကခက်ခဲသည်, ငါသတ္တုတွင်းနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားစောင့်ရှောက်။ ကျွန်ုပ်၏ Instagram ကိုတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်နှင့်ကျန်တဲ့လိုင်းများကိုအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်အမြဲတမ်း update လုပ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့် Buffer ကိုအသုံးပြု။ အတွက်စီစဉ်ထားကြသည်။
သင်၏ဘလော့၊ Instagram နှင့် YouTube ရုပ်သံလိုင်းများကိုလူသိများသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လမှခုနစ်လအကြာ၌ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းများတဖြည်းဖြည်းသတိပြုမိလာခြင်းကိုသတိပြုမိသည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်သုံးလအတွင်းကပဲတိုးတက်လာတယ်။ အရူးပဲ! ငါ 2016 ရဲ့ start ကတည်းကတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအီးမေးလ်များနှင့်လွှမ်းခြုံအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အားအကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သည်။ ငါအလွတ်ပုံစံပုံစံအတွက် dabbling ခဲ့သည်နှင့်သူမငါဖက်ရှင်ကိုချစ်ဘယ်လောက်သိသည်။ သူကကျွန်တော့်ကို Instagram ပေါ်ကလူအနည်းငယ်ကိုပြပြီးသူတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီးသူတို့ကိုသွားသင့်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ငါလုပ်ခဲ့တယ် အဲဒါဟာသူ့မှာရှိတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလိမ့်မယ်လို့တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။
ခင်ဗျားတို့အဝတ်အစားတွေစတင်လိုက်တယ် - အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိတယ် ထိုအချိန်မှစ၍ အဝတ်စတိုင်များစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့သလား။
အတိအကျ! တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါ Instagram နဲ့ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ ဒါကဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Instagram တွင်လစဉ်ပုံတစ်ပုံခန့်ကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ငါနှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အစဉ်အမြဲငါကအသုံးပြုပါ။ Wi-Fi ရှိတဲ့ကင်မရာကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တယ်၊ ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းနေတဲ့နေရာကိုဓါတ်ပုံတွေကိုမင်းဖုန်းကိုပို့ပေးနိုင်တယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံး blogging ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်
ငါ၏အစတိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ငါကမှာအားလုံးပြောင်းလဲသွားရဲ့မထင်ပါဘူး။ ငါထွက်ရပ်နေနှင့်ငါ့ဆံပင်နှင့်မိတ်ကပ်နှင့်အတူအသစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာသို့နေဆဲ။
ဟုတ်တယ်၊ အရာအားလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရိုက်ပြီးတည်းဖြတ်တယ်။ ငါတက္ကသိုလ်မှာဖက်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာလေ့လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် Photoshop နဲ့ Premiere Pro အကြောင်းနည်းနည်းလောက်သိတယ်။ ဒါကြောင့်ဗွီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတည်းဖြတ်တာဟာကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာတစ်ခုပါ။
မကြာသေးမီကမီဒီယာ၌ဤအရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများသည် 'သဘာဝကြည့်ရှုခြင်း' ဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုပိုမိုနှစ်သက်သောအမျိုးသားများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
ငါယောက်ျားအဘို့အမိတ်ကပ်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ရှိသည်ဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ယုံကြည်မှုပြissueနာတစ်ခုအနေနဲ့စခဲ့တာပါ။ အားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ချင်ခဲ့တယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငါမိတ်ကပ်ကိုဝတ်လေ့ရှိတယ်၊ ငါကြည့်ရတာနှစ်သက်တယ်။ မိတ်ကပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပတ္တူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖန်တီးမှုနှင့်ကစားစရာဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတကယ်ဘယ်သူ့ကိုမှပြောတာကိုနားမထောင်ဘူး။ မင်းမိတ်ကပ်ဝတ်ချင်ရင်ဝတ်ပါ။ သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲအခြားသူများအတွက်ပြုလုပ်ပါ။
မင်းရဲ့ပုံပန်းသဏ္alwaysာန်ကအမြဲဖန်တီးမှုအရှိဆုံးပဲ - ဘယ်ကနေလှုံ့ဆော်ခံရသလဲ။
ဤမျှလောက်များစွာသောအရာ။ လန်ဒန်ရှိလမ်းများပေါ်တွင်အေးအေးဆေးဆေးရှိသောလူများကိုတွေ့မြင်ခြင်းမှသည် Instagram ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်းနှင့် Pinterest တွင် mooch ရှိခြင်းမှတစ်စုံတစ်ရာ။ ကျွန်ုပ်တွေ့သမျှအရာအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားသည်။
ငါကျိန်းသေ Kardashians သို့စို့ခဲ့ကြရတယ်။ Kylie Jenner အတူတကွပစ်ချလိုက်သည့်ပုံသို့မဟုတ်သူမဝတ်ထားသည့်မည်သည့်အရောင်ဆံပင်တုကိုကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းနှစ်သက်သည်။
နွေ ဦး ရာသီ / နွေရာသီအတွက်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဆိုဖက်ရှင်နှင့်အလှအပခေတ်ရေစီးကြောင်း?
ငါ 90s ပြန်လာချင်ခဲ့တယ်သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်, ငါကြောင်းလမ်းကြောင်းသစ်သို့ဒါငါနေဆဲပါပဲ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါ 90s ကလေးပေါ့။
သင့်မှာသွားလာရင်း ၀ တ်စုံရှိလား
Topshop Joni ဂျင်းဘောင်းဘီ, tee, နှလုံးနှင့် Sneaker ။ ငါလွယ်ကူသောနှင့်ပေါ့ပေါ့ဖြစ်ချစ်ကြတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဗီရိုတော်တော်များများသည်အွန်လိုင်းအမှတ်တံဆိပ်မှလာသည်။ စတိုးဆိုင်များသို့ ၀ င်ရန်အချိန်ဘယ်တော့မှရတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းသည် ပို၍ အဆင်ပြေသည်။ ဒါဟာအစပိုက်ဆံအများကြီးချွေတာ။
အဝတ်အစား ၀ ယ်ရန် (သို့) ရောင်းရန် Depop / eBay ကိုသင်အသုံးပြုပါသလား။
ငါ eBay ကိုသုံးဖူးပေမယ့် 99p အတွက်အဝတ်အစားတွေဖယ်ထုတ်ရမယ်၊ မင်းမှာမင်းပိုက်ဆံအများကြီးသုံးပြီးငါမုန်းတယ်။ ငါ Depop ကိုသုံးတယ်၊ ငါမှာဒီမှာပစ္စည်းအများကြီးမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကြည့်ရတာလွတ်လပ်တယ်။ @sophiehannahrichardson ။
မင်းရဲ့ဆံပင်အကြောင်းမင်းတို့ပြောဖို့လိုတယ်။ မင်းဘယ်တော့ဆေးဆိုးခဲ့တာလဲ။ ပြုပြင်စရာအများကြီးလိုပါသလား
ကောင်းပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ကိုးနှစ်လောက်ကငါဆံပင်ရွှေရောင်သော့ခလောက်တွေလိုချင်ခဲ့တယ်။ ငါ uni မှာရှိတုန်းကပန်းရောင်၊ ပန်းရောင်နဲ့ပူစီနံအရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ကစားခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်ခဏကြာတော့ဆံပင်ရှည်တွေစစလာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါခွဲလိုက်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ဆံပင်တိုတိုကိုနှစ်သက်တယ်၊ ထို့နောက်သူမကအစိမ်းရောင်ကြီးစွန်းခဲ့သည့်အခါ Kylie Jenner ရဲ့ဆံပင်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒါကငါ့သော့ခတ်ယခုကြည့်ရှုသောအရာကိုသို့တီထွင်ပါတယ်။
သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာပုံစံတွေအများကြီးပြုမိပါဘူး - သင်မည်သို့သို့ရခဲ့တာလဲ
ကျွန်ုပ်၏ဖက်ရှင်ဓါတ်ပုံပညာဖြင့်ဘွဲ့ရရှိပြီးသည့်နောက်၊ ဒါနဲ့ငါဒီအလုပ်ကိုအလုပ်သင်အဖြစ်နဲ့လိုက်လုပ်ပြီး ၆ လလောက်အကြာမှာအလွတ်ရခဲ့တယ်။ သို့သော်လန်ဒန်တွင် ၀ င်ငွေနှင့်ငှားရမ်းခမလုံလောက်မှုတို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။
လောလောဆယ်ငါသာယခုအချိန်တွင်သာ Secret Garden ပါတီသွားနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် Hideout နှင့်ဆွီဒင်ခရီးစဉ်။ ဒါနဲ့ဖြစ်ပျက်အနည်းငယ်ကိုငါရရှိပါသည်။ ငါအိမ်တအိမ်ဝယ်ယူခြင်းအလယ်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ငါယခုအချိန်တွင်ငါ့အအားလပ်ချိန်မှာငွေအားလုံးတက်ယူမယ့်သကဲ့သို့ငါပြန် Essex သို့ပြောင်းရွှေ့တာပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့သတ္တုဆံပင်တက်တူးထိုးဗီဒီယိုက Instagram ကိုဖြတ်ပြီးသွားတာနောက်၊ ဒီနွေရာသီမှာငါတို့တော်တော်များများမြင်တွေ့သင့်တယ်ထင်တယ်။
ငါသည်ငါ့လူမှုရေးနှင့်ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးချင်တယ်။ ငါ့ကိုဘယ်ကခေါ်သွားလဲကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ငါအမြဲပိုပြီးနည်းနည်းခရီးသွားရန်တိုက်တွန်းအမြဲရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါ့ဘလော့ဂ်ငါ့ကိုနေရာတစ်နေရာယူသွားလျှင်, ဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကိုယ့်ငါလုပ်နေတာငါလုပ်နေတာကိုစောင့်ရှောက်သွားတယ်။
သူမအပေါ်ဆိုဖီကိုရှာပါ ဘလော့ဂ် , Instagram , တွစ်တာ ဒါမှမဟုတ် Youtube